Kordom - Mgbaàmà, ọgwụgwọ, usoro na ndụmọdụ.
<< Laghachi na: ọkpụkpụ cancer
Cordoma bụ ụdị obere ọrịa kansa ọkpụkpụ. Cordoma na-emekarị na njedebe nke ọkpụkpụ azụ. Nke a na-ahụkarị bụ na etiti ntọala spain a na-akpọ sacrum, mana coccyx nwekwara ike ịmetụta ya. O nwekwara ike ime na elu elu azụ azụ okpokoro isi. Ọrịa kansa nwere ike ịdịru ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọtụtụ afọ tupu a mata ya.
- Ahụ ụfụ na sacrum na ọdụ nku
Ofdị ọrịa kansa a, mgbe ọ dakwasịrị sacrum na ọdụrị, nwere ike ibute mgbu oge niile na sacrum na ọdụ ọdụ.
- Chordoma: Ọrịa cancer ọkpụkpụ nke n'olu / isi nwere ike ịkpata mgbaàmà akwara
Mgbe eriri na-emetụta akụkụ elu nke spain, n'akụkụ ọnụ ala nke azụ nke isi, mgbe ahụ enwere ike ịnwe mgbaàmà akwara - ọkachasị n'anya.
- Nchoputa ya na imaging na biopsy
Achọpụtara Kordom Onyonyo (Dịka. Nnyocha MRI, CT ma ọ bụ X-ray) gosikwara site na ntinye anụ ahụ (biopsy).
- The ọgwụgwọ mejupụtara radieshon ọgwụ na ịwa ahụ
Ọgwụgwọ chordoma na-achọ ma dị mgbagwoju anya - dịka ọ na -emekarị ọgwụgwọ ọrịa kansa ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na ọrịa cancer emetụta sacrum ma ọ bụ coccyx, mwepụ nke etuto ahụ na-arụkarị ọrụ, mana enweghị ike ịme nke a n'ụzọ dị irè n'akụkụ elu nke olu. A na-ejikwa ọgwụ na-agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa Cordoma na isi okpokoro isi.
- Nyocha oge niile
N'ihe banyere nsogbu ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, ndị mmadụ kwesịrị ịga nyocha maka ịlele ma enwere mmepe ma ọ bụ mmụba ọzọ. A na-ejikarị eme ihe nyocha nke X-ray (lee Onyonyo) ịkọ atụmatụ nha ọ bụla ma ọ bụ oge ntoju. Kwa ọnwa isii ma ọ bụ kwa afọ, X-ray nwere ike ịdị mkpa, mana enwere ike iwe ya obere oge ma ọ bụrụ na enweghị mmepe ọ bụla.
Ọzọkwa gụ: - Ikwesiri ịmara nke a gbasara ọrịa kansa ọkpụkpụ! (N’ebe a, ị ga-ahụ oke nnyocha nke ọrịa kansa ọkpụkpụ).